ऊ प्रेमी, म प्रेमिका !- फिचर - कान्तिपुर समाचार
ऊ प्रेमी, म प्रेमिका !
फाल्गुन २, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — अक्सर एकअर्काको हात समातेरै हिँड्न रुचाउँछन्, उनीहरु । उमेर समान । शारीरिक बनोटले दुवै पुरुष । बाटोमा दुईलाई देख्नेबित्तिकै मानिसहरुको आँखा अप्ठ्यारो, असहज, अमिल्दो भावमा उनीहरूतिरै अडिन्छ । आँखाबाट ओझेल नहुञ्जेल दुवैलाई हेरिहन्छन् । पछाडि खासखुस गर्छन्, 'केटा हुन् कि केटी ? केटा-केटा भएर के यसरी हिँडेको !'
अटल मगर र मनोज रोक्कालाई यस्तो नजरको बानी परिसकेको छ । आँखैले धेरै बोल्ने नजरलाई पर्वाह नगरी हिँड्छन् । मानिसका आँखामा घृणा, आशंका, प्रश्नहरुको वाण देख्छन्, जुन उनीतिरै तेर्सिरहेको हुन्छ । यी दुईलाई यस्तो व्यवहारको खासै वास्ता हुँदैन । 'केटी हो कि केटा हो ?' आँखाको इसाराबाट प्रश्न गर्नेहरुले कहिल्यै उनी दुईको अगाडि सोधेका छैनन् । मुखै अगाडि कसैले यस्तो प्रश्‍न राखे अटललाई भन्‍न मन छ, 'म केटी हुँ' ।
झट्ट हेर्दा उनी केटीजस्तै देखिन्छन् । मिलेका परेली, कुमसम्म झर्ने सिल्की कपाल, ओठमा लाली । हो, उनको शरीर पुरुष संरचनामा बनेको छ । आवरणमा पुरुष देखिए पनि मनदेखि उनी महिला हुन् । त्यसैले उनलाई पुरुष पार्टनर मनपर्छ । १० वर्षको उमेरदेखि मेकअप गर्न रुचाउँथिन् अटल । केटीसाथी जस्तै हुन मनपराउँथिन् । बाल्यकालमा धेरैले 'छोरी जस्तै देखिने' भन्दै माया गर्थे । विस्तारै उनले आफूभित्रको यौनिकताबारे बुझिन् । समाज र परिवारमा खुलेर आइन् । आँखामा गाजल, ओठमा लाली लगाएर चिटिक्क बनेर हिँड्न थालिन् । यसरी चिटिक्क बन्दा दाइ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, 'किन गरेको यस्तो । यस्तो नगर ।' अहिले त दाइले पनि उनलाई बुझेका छन् । घरको कान्छो भाइ अटल ट्रान्सजेन्डर भएकी छन् । अटल र मनोज ।
कक्षा ९ मा पढ्दा हो मनोजले आफ्नो यौनिकताबारे बुझेको । घरका जेठा छोरा मनोज । सुरुवातमा आफ्नो यौनिकताबारे परिवारलाई केहि भनेनन् । विस्तारै आफ्नो मिल्ने साथी हुँदै केहि नजिकका साथीसँग आफ्नो यौनिकताबारे खुले । नजिकका साथी र नातेदारहरुमा खुल्न उनलाई खासै गाह्रो भएन ।
आमालाई पनि कोरोना महामारीबीच भनिदिए । 'आमा रिसाउनु होला, प्रेसर बढ्ला' भन्ने डर थियो उनलाई । 'लकडाउनमा परिवारसँग धेरै समय बिताएँ । दिदी बहिनीलाई पहिल्यै थाहा थियो । मलाई त आमालाई प्रेसर बढ्ला भन्ने तनाव थियो । कुरा सुनाएको बेलुकी रिसाए झैं गर्नुभयो तर बिहान बोल्नुभयो,'मनोज सुनाउँछन् ।
परिवार र साथीहरुले बुझिदिएकै कारण उनलाई अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकलाई झै समस्या भएन । अहिले उनी आफूलाई निर्धक्क समलिंगीको परिचय दिन्छन् । अटल भने खुलेर आउन थालेको डेढ वर्ष भयो । उनी दुईलाई आफ्नो यौनिकताबारे खुल्न परिवार र समाजबाट त्यति समस्या भएन ।
प्रेम र लिभिङ टुगेदर
फेसबुकबाट मनोज र अटलको प्रेम सुरु भयो । म्युचल फ्रेन्डको सहारामा मनोजले अटललाई 'फ्रेन्ड रिक्वेस्ट' पठाए । उनलाई अटल हेर्नेबित्तिकै राम्री लागेको थियो । अटलले एक हप्तापछि रिक्वेस्ट असेप्ट गरिन् । फेसबुक साथी हुँदै फोनमा घण्टौं बोल्ने प्रेममा परिणत भयो उनीहरुको सम्बन्ध ।
धरानका मनोज कामका लागि काठमाडौं बस्थे । ४ वर्षअघिको दसैंमा घर जाँदा मनोजले पहिलोपटक अटललाई भेटे । अटललाई भेट्न लेटाङ पुगेको क्षण कहिल्यै बिर्संदैनन् उनी । 'चार बहिनीको हुलै लिएर ऊ मलाई भेट्न आएकी थिई । बहिनीहरुको कपाल सबै रातै थियो,'मनोजले अटलसँगको भेट सम्झे ।
त्यो भेटको ३ महिनापछि दोस्रो भेटमा उनले अटललाई प्रेम प्रस्ताव राखे । '३ वर्षअघिको भ्यालेन्टाइनको भोलिपल्ट उसले मलाई प्रपोज गरेको थियो,' छेउमा रहेको मनोजको हात समाउँदै अटलले भनिन्,'रातो गुलाफ, चकलेट र पेस्ट्री लिएर प्रपोज गर्न आएको थियो ।'
आफ्नो बनाउन मन लागेको व्यक्तिले प्रेम स्वीकार गर्दा मनोज खुसीले गदगद भए । ८ महिनापछि अटल काठमाडौं आइन् । मनोज काठमाडौंमै थिए । आफन्त कहाँ बस्नु भन्दा मनोजसँगै बस्न उचित ठाने अटलले । त्यसपछि दुवैजना कपनमा लिभिङ टुगेदरमा बस्न थाले । काठमाडौंको संघर्ष, अभाव र केही सहजताका बीच ३ वर्ष लिभिङ टुगेदरमा बिताइसकेका छन् उनीहरुले । 'हामीलाई खासै संघर्ष भएन सँगै बस्न । घरभेटी राम्रो पायौं । हामी दिनभरि घरमा हुन्न थियौं,' मनोजले अटललाई हेर्दै भने,'उसँग बस्दा घरमै बसे झैं लाग्छ । कहिले काहीँ झगडा पर्छ हाम्रो । जसको गल्ती हुँदा पनि मैले नै फकाउनुपर्छ ।' अटलले ठट्यौली शैलीमा थपिन्, 'किनकि म राम्री छु ।'
अटल र मनोज ।
मनोज धुलिखेलको द्वारिका होटलमा सेफ थिए । तर लकडाउनका कारण अहिले बेतलबी बिदामा छन् । अटल मेकअप आर्टिस्ट हुन् । मेकअप प्रशिक्षण गर्नुका साथै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको टिमभित्र रहेर मेकअप गर्छिन् ।
३ वर्षदेखि सँगै बस्दा उनी दुईले कसैको रोकटोक सुन्न परेन । यसअर्थमा आफूहरुलाई भाग्यमानी ठान्छन् उनीहरु । उनी दुई झैं खुलेर प्रेम गर्ने हकमा सबैलाई उस्तै परिवार मिल्दैन । समाजको सोच अझै संकुचित भएकै कारण अन्य जोडीले चाहेजस्तै जीवन जिउन नपाएको मनोज बताउँछन् । 'गाउँको के कुरा काठमाडौं मै पनि ट्रास्सन्जेन्डरमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ । उनीहरु जे हुन् त्यही भएर हिँडेकै कारण हिंसा सहन बाध्य पारिएका छन् । यो अर्थमा हामी भाग्यमानी छौं,' मनोजले भने ।
पारलैंगिक समुदायका मानिसहरु आफ्नो खुट्टामा उभिए समाजबाट त्यति हिंसा भोग्‍न नपर्ने मनोजको भनाइ छ । 'समाज त गलत छँदै छ । तर हामी पनि कहीँ गलत छौं कि ! आफ्नो करियर र जीवनको विषयमा धेरै सोच्दैनौं,' उनले भने,'आफ्नो खुट्टामा उभियौं भने त हाम्रो आलोचना गर्ने, छक्का, हिजडा भनेर हेप्ने काम हुँदैन थियो होला । त्यसकै कारण आत्महत्या गर्ने कम हुन्थ्यो होला ।'
समाजमा वर्जित ठानिने यस्तो प्रेमका लागि खुला समाजको आवश्यकता ठान्छन् उनी । 'हामी बाँच्नलाई खुल्ला विचार चाहिन्छ। अब पुरानो विचार राखेर हुँदैन । अझैकति साथीहरु समाजमा खुल्न सक्नु भएको छैन,' उनले भने,'उनीहरु बलियो भएर खुलेर आउन उत्साह दिन चाहन्छु । भित्र र बाहिरको दुईवटा जीवन बाँच्न धेरै गाह्रो छ ।' निकट भविष्यमा उनी दुई बिहे गर्ने सोचमा छन् ।
आफ्नो उमेरका साथीहरु फुटबल खेल्दा तेन्जु योञ्जन भाँडाकुटी खेल्न रुचाउँथे । केटी साथीहरुसँग 'बेहुला बेहुली' बनेर खेल्दा सधैं उनलाई बेहुली बन्नुपर्थ्यो । त्योबेला परिवारले उनको व्यवहारवाई बालापन नै ठाने । उनी केटा भन्दा केटी साथीहरुसँग बढी घुलमिल हुन्थे । पाँच कक्षा पुगेदेखि नै उनलाई केटी बन्ने रहर जाग्यो । आफूले लगाउन नपाए पनि आमालाई नङमा पालिस लगाएर आनन्द लिन्थे, तेन्जु ।
नृत्यमा सानैदेखि माहिर । विद्यालयको हरेक कार्यक्रममा नृत्य प्रस्तुत गर्थे । विद्यालयमा शिक्षकले उनलाई केटा बनाएरै नचाउथे । नाच्न पाउँदा गालामा रातो लिपिस्टिक लगाइदिन्थे । उनी त्यसैमा मख्ख हुन्थे । कक्षा ७ मा हुँदा उनले केटीको भेषमा 'चाहिँदैन हिरा र मोति' बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरे । त्यतिबेला धेरैले नृत्यको तारिफ मात्रै होइन उनलाई केटी बन्दा सुहाउँदो रहेछ भन्दै प्रतिक्रिया दिए । उनी त्यही प्रतिक्रियाले पनि हौसिए । एकदमै राम्री भएर बस्न मन पर्थ्यो तेन्जुलाई । तर व्यवहारमा व्यक्त गर्न सक्दिन थिइन् उनी । 'समाजले के भन्ला ?' भन्ने डर हुन्थ्यो उनलाई । तेन्जु योञ्जन । तस्बिरः दीपेन्द्र रोका
घरको एक्लो छोरो तेन्जु काकाकी दुई छोरीसँगै भैंसीपाटीमा हुर्के । कक्षा ९ मा पढ्दाआफ्नो शरीरको विकास र भित्री मनको चाहना ठिक विपरीत पाए । हाउभाउ केटी तर बढ्दै गरेको दाह्रीमा उनले आफूमा भएको फरकपनको आभास गरे । 'त्यतिबेला मलाई केटा मनपर्दो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो,' उनी सम्झिन्छिन् ।
शिक्षक सधैँ उनलाई यो 'नक्कले छ' भन्दै जिस्काउथे । 'हाउभाउ केटीकोजस्तो भए पनि, बच्चादेखि यो यस्तै हो भनेर परिवारले सामान्य लिनुहुन्थ्यो,' आफ्नो परिवारबारे तेन्जु भन्छिन् । कक्षा ९ मा पढ्दा उनी एक पुरुष साथीसँग आकर्षित भए । गृहकार्य गरिदिने, आफ्नो वास्ता गरिदिने उक्त साथी उनलाई मन पर्थ्यो । तर उनले त्यो बेला आफूलाई बाँधेर राखे ।
कलेज सुरु भएपछि उनी नृत्य कक्षामा जोडिए । त्यता समलिंगी साथीहरु भेटिए । तर आफ्नो यौनिकताबारे अझै खुल्न सकेनन् । 'कतिले तिमी समलिंगी हो भनेर प्रश्‍न गर्दा होइन भनेर पन्छिन्थें, ' उनले पुराना दिन सम्झिन् । तर विस्तारै आफ्नो यौनिकताबारे उनको बुझाइ फराकिलो बन्दै गयो । कलेज पढ्न थालेपछि भिडियोमा कोरस भएर नृत्य सुरु गरिन् । त्यता पनि आफूजस्तै साथीहरु देख्‍न थालिन । त्यसपछि उनी परिवार र समाजमा समलिंगी भएर खुलिन् । परिवारलाई आफू समलिंगी भएको नखुले पनि उनको व्यवहारबाट सबैले बुझ्दै गए । साथ दिए ।
१२ को पढाइपछि इन्टर्न गर्न मलेसिया पुग्दा तेन्जुको भेट एक पाकिस्तानीसँग भयो । 'हामी बस्ने होटलकै ७ फ्लोवरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ । म आफ्नो कोठा पुग्न पौडी पोखरी घुमेर पुग्नुपर्ने । म आउँदा र जाँदा सँधै उहाँ त्यही पोखरीमा बसिरहेको हुनुहुन्थ्यो,' उनले पाकिस्तानी पुरुषको भेट सम्झिन्छिन् ।
तेन्जु एउटा पसलमा 'पार्ट टाइम' काम गर्थिन् । ती पाकिस्तानीले उनलाई त्यहाँसम्म पछ्याउन थाल्यो । एक दिन रातो गुलाफको गुच्छासहित काम गर्ने पसल अगाडि आएर फिल्मी शैलीमा प्रेम प्रस्ताव पनि राख्यो । दुईबीच प्रेम अंकुरायो । लिभिङ टुगेदरमा बस्न थाले । पाकिस्तानी युवकले आफ्नो परिवारलाई तेन्जुको सम्बन्ध खुलाएका थिए । उनको परिवारले आफू दुईलाई साथ दिएको देख्दा तेन्जुलाई लाग्यो,'यस्तो सम्बन्ध त प्राकृतिक नै रहेछ । सामान्य नै हुँदो रहेछ । मैले केही पाप गरेको रहेनछु । ममा झनै कन्फिन्डेट आयो,' तेन्जुले सुनाइन् ।
उसको परिवारले 'बहु' भनेर सम्बोधन गर्दा तेन्जु खुसीले भुत्तुकै हुन्थिन् । सम्बन्ध सुरु भएको १ वर्षपछि पाकिस्तानीलाई बिहेको दबाब आयो । 'इन्डोनेसियामा भएको केटीसँग उसको लभ परेको रहेछ । परिवारले मिलाइदिएको रहेछ । पछि उसको गर्लफ्रेन्डसँग भेट भयो,' तेन्जुले सुनाइन्, 'सबैजना समलिंगी नै हुँदैन । उहाँ बायसेक्सुअल हुनुहुन्छ भनेर पछि थाहा पाएँ ।'
पाकिस्तानी प्रेमीले परिवारको दबाबमा बिहे गर्ने निर्णय लियो । प्रेमीसँगको वियोगमा आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेकी तेन्जुले युवकसँगको प्रेम, यादहरुलाई मलेसियामै छोडेर काठमाडौं फर्किन् । काठमाडौंमा आफ्नो नृत्यको करियर थालिन् । कोरोयोग्राफीमा उदायमान तेन्जुले फिल्म 'ऐश्वर्य', 'कस्मिक लभ,' 'खुर्पा' लगायत ३ दर्जन बढी भिडियोमा काम गरिसकेकी छन् ।
हिजोआज कतिले तेन्जुलाई भन्छन्,'तपाईं मेरो आइडल हो । मलाई तपाईंजस्तै बन्नु छ ।' उनी मनमनै भन्छिन्,'म जस्तो नबन्नु । म जस्तो कहिल्यै नहुनु । सक्छौं भने आफूलाई परिवर्तन गर ।'
उनी अझै अल्पसंख्यक समुदायको लागि समाज उदार नरहेको बताउँछिन् । 'हाम्रो समाज कपटी छ । तपाईंहरु अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेहरुले पछाडि योसँग केटाहरु बच है भनिरहेका हुन्छन् । मलाई त्यसैमा दुःख लाग्छ,' उनले भनिन्,'मानिसको समझ कहिले परिवर्तन होला भनेर चित्त दुख्छ । जुन प्रकारले मेरो परिवारले मलाई बुझेको छ । त्यो प्रकारले अरुले पनि बुझिदिएको भए हाम्रो समाज कति परिवर्तन हुन्थ्यो । त्यसपछि मलाई आइडल मान्नेहरुलाई जस्तो बन्न मन छ बन भन्न सक्थें । '
उनी भन्छिन्,'समाजमा हामीले जस्तो छौं त्यो होइनौं भनेर बाँच्नु नपरोस् । हामीले जस्तो दु:ख नपाओस् अरुले । हामी हाम्रो नागरिकताको पहिचानको लागि लड्दै छौं । अझै मेरो नागरिकतामा लिंगको परिचयमा पुरुष भनिएको छ ।'
'गाउँमा सबैको बिहेमा हजार/पन्ध्र सय दिँदै आएको छु । यसकै बिहेमा सब पैसा फिर्ता ल्याउनुपर्छ,' आमाले यसरी बिहेको सपना बुनिरहँदा रोनिशको मन चसक्क घोच्छ । गत तिहारमा गाउँ जाँदा परिवारका उनको बिहेको योजना बनाउँदै थिए । चार दिदीहरु भन्दै थिए,'एउटा भाइको बिहे त धुमधामले गरिन्छ । चार दिन अगाडिदेखि नाचगान गर्नुपर्छ ।'
बिहेको योजना बुन्दै गरेको माहोलमा रोनिश आफूलाई एक्लो पाउँछन् । उमेर बढ्दै गएपछि उनलाई बिहेको दबाब बढ्न थालेको छ । भेट्ने जति आफन्तले उनलाई 'बिहे त गर्नैपर्छ । वंश बचाउनैपर्छ' भनेर सल्लाह दिन्छन् । परिवार र बुढी आमाका लागि आफ्नो इच्छालाई दबाएर बिहे गरिदिउँ भन्ने सोच्छन् पनि । तर झूटमा कसैको जिन्दगी बिगारिदिने मन छैन उनलाई ।
'केटा नैसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर केटीसँग त बिहे गर्दिँन,' रोनिशले भने । उनी समलिंगी हुन् । समाज र परिवारसँगको डरका कारण २५ वर्षीय उनी अझै खुल्न सकेका छैनन् । अहिले सामान्य हुँदा गरिने व्यवहार समलिंगी भएको थाहा पाएपछि उस्तै नहोला भन्ने डर उनमा छ । 'खुलेर आउनेहरुलाई सलुट छ मेरो । तर मसँग खुलेर आउने हिम्मत छैन । यही समाजमा बस्छु । तर यही समाजको डर लाग्छ,' उनले आफ्नो पीडा सुनाए ।
पार्टनर पनि बिहे गर्दै
१७ वर्षको उमेरमा रोनिशले आफ्नो यौनिकताबारे थाहा पाएका हुन् । कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा साथीहरुले जिस्काउन थालेको युवतीसँग प्रेम टुसाउन थालेको थियो । तर फेसबुकमार्फत उनी आफूजस्तै साथीहरुसँग नजिकिन थाले । समलिंगीबारे खोज अनुसन्धान बढ्यो ।
फेसबुकबाट आफ्नो यौनिकताबारे थाहा पाएपछि उनी खुसी भए । आफ्नो यौनिकताबारे बुझ्न उनलाई अझ रहर जाग्यो । अनलाइनहरुमा खोजतलास गर्न थाले । विस्तारै उनमा पुरुषप्रति रुची बढ्न थाल्यो । 'केटासँग भेटिरहुँ, कुरा गरिरहुँ' लाग्थ्यो उनलाई ।
त्यसपछि कलेजकी ती युवतीसँगको सम्बन्धलाई 'ब्रेक' दिए । 'खासमा म समलिंगी रहेको खुलाएर उनीसँगको सम्बन्ध तोड्न खोजेको थिएँ,तर सकिनँ । मायाको नाटक गरेको बताएर उनीसँगको सम्बन्धलाई पूर्णविराम लगाइदिए,' उनले भने ।
कक्षा १२ सम्मको अध्ययन सकेपछि उच्च शिक्षाका लागि रोनिश काठमाडौं आए । फिल्म क्षेत्रमा काम गर्न थाले । काठमाडौंमा आफूजस्तैहरूसँग उनको संगत बढ्न थाल्यो । गाउँमा भन्दा काठमाडौंमा केही स्वतन्त्र अनुभव गरे रोनिशले । उनी भन्छन्, 'मलाई थाहा थियो, फिल्म क्षेत्रमा मजस्तै साथीहरु भेटिन्छन् । यहाँ स्वतन्त्र विचार भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् ।'
काठमाडौं आएको केहि महिनापछि फेसबुक मार्फत उनको एक युवकसँग प्रेम बस्यो । उनी सकेसम्म विवाहित र विदेश जाने युवकसँगको प्रेममा पर्न चाहँदैन थिएँ । सम्बन्धमा बसेको १५ दिनपछि रोनिशले आफ्नो प्रेमी विवाहित र विदेश जाने तयारीमा रहेको थाहा पाए । प्रेममा डुबुल्की मार्न नपाउँदै उनीहरुको सम्बन्धमा काँडा भेटियो ।
रोनिशले चाहँदैन थिए कि आफूले प्रेम गरेको युवकको वैवाहिक सम्बन्ध टुटोस् । त्यसैले उनले सम्बन्धलाई पूर्ण विराम लगाउन खोजे । मायाको अगाडि कसको के लाग्दो रहेछ, ती विवाहित युवक पनि रोनिशसँगको प्रेममा परिसकेका रहेछन् । आफू पनि समलिंगी भएको कुरा श्रीमतीलाई सुनाउँदै उनले वैवाहिक सम्बन्धलाई पूर्णविराम लगाए । त्यसपछि उनीहरुबीच प्रेम गाढियो, लिभिङ टुगेदरमा बस्न थाले । यो तीन वर्षसँगै बस्दा उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई लिएर समाजले ‌औंला उठाएको छैन ।
उनीहरु दुवै उस्तै देखिन्छन् । घरबेटीलाई आफूहरु दाजूभाइ भनिदिन्छन् । तर मनमा भने घरबेटीले आफूहरुको यौनिकताबारे थाहा पाइसके कि भन्ने डर रोनिशलाई लागिरहन्छ । ' जहाँ जाँदा पनि हामीसँगै हुन्छौं । कसैले थाहा पाउँछ कि शंका पो गरेको छ कि भन्ने डर छ,' रोनिश भन्छन् ।
अहिले दुवैलाई बिहेको दबाब आउन थालेको छ । डिभोर्सी प्रेमीलाई आफूलाई भन्दा धेरै बिहेको दबाब आएको रोनिश सुनाउँछन् । 'उसको जहिल्यै बिहे कै कुरा भइरहेको हुन्छ । उसको परिवारले केटी हेरिरहेको कुरा सुनिरहँदा मन दुख्छ,' रोनिश भन्छन् । उनी आफैं भने बिहेको दबाबबाट कसरी मुक्त हुने सोचिरहेका हुन्छन् । फ्याट्ट आफ्नो यौनिकताबारे खुलौं कि भन्ने छ उनलाई । तर उनी समाज र परिवारको डरले नै बाँधिएर आफूभित्रको यौनिकतालाई लुकाउँदै हिँड्न बाध्य छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७७ १३:४८
कलाकारलाई उपाधि : सम्मान कि प्रचारबाजी ?
रेखा थापा भन्छिन् : 'कलाकार महान र तुच्छ हुँदैन'
माघ ३०, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — कोरोना महामारीमा अभिनेता राजेश हमाल र अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाबीचको विवाद निकै चर्कियो । विवादको विषय थियो, 'महानायक'उपाधि । अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले एक अन्तर्वार्तामा राजेशलाई दिइएको 'महानायक' उपाधिमाथि उठाएको प्रश्नलाई लिएर चर्कै विवाद भयो ।
'महानायक' विवाद चर्किँरहँदा उपाधिको पक्ष विपक्षमा बहस भयो । कतिले हमाल महानायकको हकदार रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिए । कतिले कुनै पनि कलाकारलाई यस्तो उपाधि दिन नहुने बताए । विवादकै कारण सामाजिक सञ्जालमा आएको टीकाटिप्पणीले डिप्रेसनको नजिक पुगेको दीपाले बताइन् । जे होस् यो विवाद अहिले सेलाएको छ ।
'महानायक' विवाद सेलाएको केही महिनामै 'आरके इन्टरटेन्टमेन्ट'ले अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई 'महानायिका' उपाधि दिएको छ । माघ २४ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, अभिनेता राजेश हमाल र नीर शाहलगायतको उपस्थितिमा उनलाई 'महानायिका'को ताज पनि पहिर्‍याइयो ।
'महानायक' उपाधिमाथि प्रश्न उठ्दा उठ्दै अर्को उपाधि किन आवश्यक पर्‍यो त ? आरके इन्टरटेन्टमेन्टका संस्थापक अध्यक्ष राम केसी करिश्माले लामो समय फिल्म क्षेत्रमा योगदान दिएकै कारण उपाधि दिएको तर्क गर्छन् । 'हामीले यही क्षेत्रमा रहेका नीर शाह, शम्भुजित बास्कोटा र चलचित्र विकास वोर्डका सदस्यसँगको छलफलपछि उहाँलाई महानायिका घोषणा गरेका हौं,' अध्यक्ष केसीले भने,'करिश्माले तीन दशकदेखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउनु भएका कारणले उहाँलाई यो पदवी दियौं ।'
संस्थाको ९औं वार्षिक उत्सवमा आफूहरुले राजेश हमाललाई 'महानायक' घोषणा गरेको उनको दाबी छ । राजेशले विदेश पलायन नभई फिल्म क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको आधारमा उपाधि दिइएको उनी बताउँछन् ।
'महानायिका' किन चाहियो त ? भनेर प्रश्न गर्दा अध्यक्ष केसीले जवाफमा भने,'फिल्म क्षेत्रको अग्रजलाई सम्मान गरेनौँ भने उद्योग धरासायी हुन्छ । यही क्षेत्रमा समर्पित भएर लागेका कलाकारलाई सम्मान गर्यो भने राज्यको ध्यान पनि जाने भयो । त्यसैले उहाँहरुलाई सम्मान गर्यौं ।'
उनी थप्छन्,'राष्ट्रिय खेलाडीलाई तलब छ । खोइ त कलाकारलाई तलबको व्यवस्था । ती कुरा सुनिश्चित गर्न हामीले उपाधिको घोषणा गरेका हौं ।'
के भन्छन् त कलाकार ?
अभिनेत्री रेखा थापा कुनै कलाकार यस्तो उपाधिमा अल्झिन नहुने बताउँछिन् । 'उपाधि जनताले दिने कुरा हो । महानायक एक जना मात्र हुन्छ, उहाँ पृथ्वीनारायण शाह हो । महानायकले देश, जनता र भूगोलका लागि के गरेको छ भन्नेले अर्थ राख्छ,' उनले भनिन्,'कलाकार कोही महान र तुच्छ हुँदैन । कलाकार सबैले नवरसमा काम गरिरहेको हुन्छ । कहिले पनि कलाकार पोख्त र पूर्ण हुँदैन । उसले जहिल्यै पनि सिकिरहेको हुन्छ ।'
कलाकारले यस्ता उपाधि लिनु अगाडि सोच्नुपर्ने रेखाको भनाइ छ । 'कलाकार कोही सानो र ठूलो हुँदैन । कलाकारले गर्ने अभिनयको प्यारामिटर एउटै रसमा हुन्छ,' रेखाले भनिन्,'म कोही महान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ ।'
यस्तो उपाधिका मापदण्डमाथि प्रश्न गर्छिन् रेखा,'महान हुनुका मापदण्ड के-के हुन् ?'
फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित मिडियाले यस्तो विषयमा बहस गर्न नहुने बताउँछन् । 'हामी लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने यो समाजमा सबैलाई आ-आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने अधिकार छ,' उनले भने,'जसको जस्तो सोच हुन्छ उसले उस्तै अवधारणा निर्माण गर्छ । महानायक/महानायिका बनाउनेहरुले आफ्नो निश्चित स्वार्थअनुसार उपाधि दिइरहेका हुन्छन् ।'
अभिनेत्री सुरक्षा पन्त उपाधि दिने प्रवृत्तिले दासत्वतिर लाने विचार राख्छिन् । 'हामी कसैलाई पनि देवता मान्ने धारणामा विश्वास गर्नुहुँदैन । अभिनेता/अभिनेत्रीलाई पनि देवता मान्नु हुँदैन,' उनले भनिन्,'कलाकारको कामको प्रशंसा गर्ने हो । सँधै एकैजना व्यक्तिले शासन गर्ने विचारधारा हुनुहुँदैन । महानायिका/महानायक दियो भने उसले त्यो पद सम्हालेर बसेको जस्तो हुन्छ ।'
अवार्डले नै कलाकारलाई हौसला दिने बताउँदै कलाकार दर्शकको मायामै रमाउन सिक्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । 'कलाकार शान्त रुपमा चम्कनुपर्छजस्तो लाग्छ । उपाधि दिने प्रथाले मानिसलाई दासत्वतिर लैजान्छ जस्तो लाग्छ,' उनले भनिन् ।
अभिनेता विपिन कार्की कलाकार भएर चिनिनु नै ठूलो उपाधि रहेको बताउँछन् । 'कुनै उपाधि चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । उपाधि कसले दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ,'उनले भने,'राष्ट्रियस्तरबाटै उपाधिसहित पुरस्कार दियो भने उचित नै हो जस्तो लाग्छ । संस्था वा व्यक्तिगत तवरले उपाधि दिनुभन्दा राज्यले दिएको सर्वमान्य हुन्छ ।'
अभिनेता दीपकराज गिरी महानायिकाको उपाधि एक जनालाई दिँदा अन्य अभिनेत्रीहरुको चित्त दुख्ने बताउँछन् । 'कलाकारलाई उपाधि दिनु आपत्ति होइन । हाम्रो कलाकार साथीले उपाधि पाउनु त राम्रो हो । तर महानायिका भनेर उपाधि दिँदा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका अभिनेत्रीहरुलाई त चित्त दुख्न सक्छ,' उनले भने ।
सर्वप्रिय, सदाबहारको ट्याग दिए पनि महानायक र महानायिकाको उपाधि दिन नहुने कसैलाई दिन नहुने उनको भनाइ छ । 'भोलि कुनै कार्यक्रम गरेर महानायिका, महाकवि, महालेखक, महानायक घोषणा गर्नु राम्रो परम्परा हो जस्तो लाग्दैन । कलाकारको अगाडि कुनै उपाधि आवश्यक छैन । हरिवंश, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, राजेश हमाल नामै काफी छ,' उनले भने ।
'उपाधिको मूल्यांकन गर्ने कसले?' दीपकको प्रश्न छ । 'हामी किन सबैलाई महान बनाउने । यो गलत प्रवृति हो । महान त कलाकारले दिएको फिल्मले हुने हो,' दीपकले भने ।
उपाधिबारे प्रश्न गर्दा अभिनेत्री करिश्माले भने कान्तिपुरसँग बोल्न चाहिनन् ।
प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ १५:४०
राजनराज सिवाकोटी भन्छन्, '१२ वर्षपछि चर्चामा आउँदा फूलबुट्टे सारी बिर्सिसकेको थिएँ'
जसले भोक मेटाए
शव ओसार्न खटिँदा...
टीका भट्टराई फाल्गुन १४, २०७७
हाम्रो शिक्षा पद्धति खास गरी शिक्षण संस्था कहिले खोल्ने र बन्द गर्ने, अनि अलि असल भयो भने परीक्षा कसरी र कहिले लिने भन्ने विषयवरिपरि नै...
कोभिडपछिको विश्वमा कूटनीति
एस. जयशंकर फाल्गुन १४, २०७७
कोभिड–१९ महामारीलाई परास्त गर्ने अभीष्टसहित हामी सन् २०२१ मा प्रवेश गरेका छौं । प्रत्येक समाजले यसलाई भिन्न तरिकाले सामना गरे पनि, यसविरुद्ध जुझे पनि वैश्विक कूटनीतिले...
‘छोरीलाई धेरै पुलपुल्याउनुभ’को रैछ !’
मधु राई फाल्गुन १४, २०७७
केही दिनअघि दाङ, राजपुर गाउँपालिका–७ स्थित सिक्टा माविका शिक्षक हेमराज विक विद्यार्थी कुटेका कारण पक्राउ परे । गणित र विज्ञानका शिक्षक विकले आफ्नो विषयमा शून्य अंक...
पशुपतिमा जलहरी : जबर्जस्ती नगर
सम्पादकीय फाल्गुन १४, २०७७
पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने विषय यसै पनि विवादास्पद थियो । सोमबार त सर्वोच्च अदालतले पनि छलफलको टुंगो नलागेसम्म जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरकालीन...
अपडेटः शनिबार, १५ फागनु, २०७७ । ०६ : ४५ बजे